Magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay Kulan looga hadlayo horumarka, cadaaladda iyo waliba midnimada Soomaaliya\_\_Daawo sawirada// | Somaale.com
Magaaladda Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay Kulan looga hadlayo horumarka, cadaaladda iyo waliba midnimada Soomaaliya\_\_Daawo sawirada//
Kulankaan oo ay soo qaban-qaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu casuumay Pr Axmed Ismaaciil Samatar iyo Dr. Cali Khaliif Galeyr, oo labaduba ka tirsan mudaneyaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, si ay sharaxaad uga bixiyaan habsami u socodka isbedalka cusub ee ay Soomaaliya gashay.
Waxaa uu sheegay in ay Soomaaliya xiligaan gashay waji iyo waayo cusub oo u baahan in laga faa’ideysto, hase ahaatee ay ku horgudban yihiin dhibaatooyin aad u fara badan, kuwaasi oo ay wajihi doonaan madaxda hogaaminaysa dowladda cusub.
“Waxaa jira dhibaatooyin farabadan oo ka da’weyn dowladdan cusub ee aan ka tirsanahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin: ammaan la’aanta jirta, barakaca iyo kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha Dhadhaab Kenya. Sidoo kale shaqo la’aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo qalin-jabinaya maalin waliba,” ayuu yiri xildhibaan Axmed Ismaaciil Samatar.
Si looga gudbo dhibaatooyinkaasi faraha badan ee uu xusay ayaa waxaa uu sheegay Axmed Ismaaciil Samatar in loo baahan yahay in ay dowladda qaado sadex tilaabo, si ay ugu guulaysato qorshaheeda iyo waqtiga ay haysato, kuwaasi oo kala ah: cadaalad, karti iyo ku dhaqanka dastuurka dalka u degsan.
Dhinaciisa, waxaa kulankaan ka hadlay Cali Khaliif Galeyr oo ka mid ahaa ra’isal wasaareyaashii Soomaaliya soo maray,hadana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, waxaana uu u sharaxay dadweynaynihii madashana soo xaadiray rejayada cusub ee Soomaaliya ka curatay iyo sida loogu baahan yahay in looga faa’ideysto.
Cali Khaliif, waxaa uu sheegay in dowladda cusub ay tahay nidaam dalka Soomaaliya ka hirgalay, islamarkaana loo baahan yahay in laga wada-shaqeeyo siddii nidaamkaasi rejada ku dhisan uu sii shaqeyn lahaa. Waxaa sidoo kale mujtamaca Soomaaliyeed uu kala dardaarmay in ay la shaqeeyaan oo ay u hogaansamaan madaxda dowladda, islamarkaana ay garab istaagaan.
Sidoo kale xildhibaan Cali Khaliif, waxaa uu ka hadlay xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada jira iyo dhismaha kuwa cusub, waxaana uu sheegay in ay haboon tahay ka talo bixinta arrintaasi in looga haro dowladda dhexe ee wadanka ka jirta, isagoo si gaar ah uga hadlay Jubbooyinka iyo Khaatumo oo uu sheegay in ay maamulka goboladaasi ay taladooda leeyihiin dadka ku dhaqan, dowladda dhexena looga baahan yahay in ay gacan ku siiso.
“Anigu ma aamisani in maamul u sameynta Jubooyinka lagala tashanayo Kenya iyo Itoobiya waa mid u taaladda maamul u sameyntoodu in ay ku heshiiyaan dadka nool, dowladda dhexena looga baahan yahay in ay garab ku siiso,” ayuu yiri Cali Khaliif.
Labada xildhibaanba waxaa ay isku raaceen in ay Soomaaliya xiligaan ka ifeyso rejo buuxda, haddii dowladdu ay karti muujiso, islamarkaana ay shacabka Soomaaliyeed fursad siiyaan, lana shaqeeyaan.
Minnesota waa halka ay ku dhaqan yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ku nool, waxaana ay baahi badan u qabeen in ay wax badan ka ogaadaan isbeddallada iyo wax ka soconaya dalkoodi hooyo, iyadoona labadaan mudane ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay taasi ka haqabtireen intii kulanku socday. Waxaana dadku ay fursad u haleen in ay si toos ah weydiiyan su’aalo ku saabsan marxaladda dalku uu marayo.
Kulamada ceynkaan ah ee ay madaxda dowladdu la yeelanayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibadda ayaa waxaa ay abuuri karaan fursado wada-shaqeyneed oo dhexmarta dadweynaha iyo madaxda dowladda.